Chakagadzirwa Palm Leaf Roofing nokuda Tourism Building Construction
Chakagadzirwa Palm Leaf Roofing
8 zvidimbu nokuti 1 mativi mamita denga
More chakaita zvokugadzirwa Thatch Styles:
Kuti uwane zvigadzirwa, unogona kushanyira pano:
Vamwe zvinyorwa zvedu uye ndokurongedza zvinhu:
1. Product Description nokuda chakagadzirwa Palm Leaf Roofing:
Chakagadzirwa reuswa imwe yedu huru zvigadzirwa.
Simulated dzinongoitika reuswa kuti anotaridzika sei zvechokwadi.
Kufurirwa mwando kuora.
Not chepfu (eco ushamwari uye kwete kukuvadza utano)
Birds, nemakonzo nehonye havagoni kudya (hapana zvinosemesa infestations!)
No mamwe rechengetedzo mari!
2. Parameters pamusoro Chakagadzirwa Palm Leaf Roofing :
8 Pieces akafukidza 1 mativi mita kubva padenga
Kugara kabhoni Size: 40x50x60cm
Carbon uwandu: zvidimbu 50
3. Accessories pamusoro Chakagadzirwa Palm Leaf Roofing :
Ridge Tile chaigona kuitwa vatengi.
4. Kushandiswa Chakagadzirwa Palm Leaf Roofing :
5. Installation kurairira Chakagadzirwa Palm Leaf Roofing :
Chakagadzirwa thatchs anogona arovererwe, stapled kana Volt zvakananga huni battens, simbi waya pajira riya, plywood kana sezvo chikamu zvizere nemakadhibhokisi gadziriro zvichienderana mvura uye aesthetic zvavanosarudza.
6. Installation zvishandiso Chakagadzirwa Palm Leaf Roofing :
7. Delivery, Shipping, Incoterms, Payment mashoko uye Sample wokuti Chakagadzirwa Palm Leaf Roofing :
8. Company kwakaita okusuma Chakagadzirwa Palm Leaf Roofing :
Xiamen Beatles Building Material Co., Ltd, tiri mumwe achitungamirira makambani kuti chakaita zvokugadzirwa reuswa, chakaita zvokugadzirwa bambu, chakagadzirwa noruzhowa, chakagadzirwa nemakwati, etc mu China. Ndivo 100% simulation. Vamwe vanogona kuva fireproof uye isapinda. Tinogara kuva mienzaniso itsva maererano vatengi edu 'zvinodiwa. musika yedu chikuru chiri China, asi isu tiri kuenda kuvhura mhiri kwemakungwa pamusika mumakore achangodarika. Nesuwo mugotenga Outdoor WPC rusvingo Panel uye flooring, polyester shinda, simbi waya pajira riya, etc. Welcome vabvunza yenyu kwatiri.
Previous: Chakagadzirwa Grass Thatch nokuda chakaita zvokugadzirwa Resin nokuda Landscape Roofing
Next: Chakagadzirwa Palm Thatch Roof usina kukonekita nokuda Tropical House Decoration
Chakaita zvokugadzirwa Palm Thatch Roof usina kukonekita zvakafanana Kupedza ...
Chakagadzirwa epurasitiki zvakavanzika muzambiringa fenzi pechifukidziro
Chakaita zvokugadzirwa Tiki Hut Thatch nokuda Park Roof Kufukidza
Chakagadzirwa Thatch Roofing usina kukonekita nokutengesa nokuda Saka ...
Chakaita zvokugadzirwa amburera Thatch Reed for Sale
Plastic Tiki Top Thatch kuti amburera Cover mu UK